Edezi ndebiri ndebiri na OSX dị mfe karịa folda Ọdịnaya | Martech Zone
Edezi ndebiri ndebiri na OSX dị nfe karịa folda ọdịnaya
Sọnde, Septemba 3, 2017 Sọnde, Septemba 3, 2017 Douglas Karr
N'ihi na email HTML anaghị asọpụrụ HTML5 na CSS3 n'ozuzu ya, ọ na-achọ ọtụtụ tebụl akwụkwụ iji mee ihe ọ bụla dabara nke ọma yana itinye nzaghachi maka ngwa mkpanaaka. Mgbe ịmalitere iwu ndebiri email dị mgbagwoju anya site na ọtụtụ isi mmalite, koodu agbakwunyere, na nhazi dịgasị iche, ọ dị mfe ịlafu na koodu gị.
Iji ya 250ok'S imewe ule, M nwere ike ịchọpụta na anyị ozi email anya dị mma gafee niile desktọọpụ na mobile ahịa. Emechara m kpaliri nke anyị Pọdkastị Martech nye onye obia ohuru nke choro edezi nke akwukwo ozi. Ọzọkwa, emelitere m akwụkwọ akụkọ ahụ na nke anyị ire akwụkwọ akụkọ. Ka m na-eme ndezi ndị ahụ na isi ndebiri anyị, m mebiri koodu ahụ wee malite ịhụ esemokwu ebe e mebiri email anyị… akụkụ nke ya etiti wee hapụ ndị ọzọ ka ha zọrọ ezi.
Onye nchịkọta akụkọ m na-ahọrọ na-efu otu njirimara isi, ọdịnaya ọdịnaya, nke ahụ gaara eme ka ọ dịrị m mfe ịmata ebe nsogbu akwụ m nọ. Ọdịnaya ọdịnaya na-ahazi gị Ọdịdị na sidebar ebe ị nwere ike mụbaa ma na-awụlikwa elu ozugbo na ngalaba na ị chọrọ dezie. M ebudatara nnọọ ole na ole editọ urua gara aga na-achọ oké ikpo okwu na rutere na espresso.
Ozugbo m mepere email na Espresso, achọtara m okwu ahụ ma nwee ike idozi ya n'ime sekọnd ole na ole (echefuru m imechi tebụl). Pụrụ ịhụ otú o si arụ ọrụ na nseta ihuenyo n'okpuru… koodu ahụ dị n'aka ekpe, mana Nchịkọta mpịachi ọdịnaya dị n'aka nri. Nke a bụ tebụl edozi, mana ị nwere ike ịhụ otu m ga - esi nwee ike ịchọpụta nesting ma ọ bụ okwu nchịkwa na ngwa ngwa email m!
Espresso abụghị naanị maka idezi ozi ịntanetị, ọ bụ nchịkọta akụkọ siri ike maka Apple OSX na njirimara ndị a:
Mpekere - shortzọ mkpirisi ka ị jikọta ma gbasaa ndebiri dabere na mkpado na snippets omenala.
Ngwaọrụ ọkacha mmasị - Hazie ogwe ngwaọrụ gị site na iji ihe omume, snippets, na menus maka inweta ọsịsọ.
Templates - Maka faịlụ, nchekwa ma ọ bụ ọrụ. Jiri nke etinyere n’ime ya, ma ọ bụ chekwaa obere ego akwụ gị nwere ike iji rụọ ọrụ. Ezigbo onye na-echekwa oge.
Oghere ọrụ - Ugbu a, na mgbanwe nke taabụ mgbe tụnyere ọbụna karị were were na gị oru ngo faịlụ.
Mepee Ngwa ngwa - Gbanwee n'etiti akwụkwọ na-enweghị na-ewe mkpịsị aka gị na keyboard. Ọ bụ Go oge.
Ntọala siri ike - Zippy edezi. CodeSense. Kpakọba. Ntụziaka Indentation. Mgbazi guzozie. Ha niile, jiri nwayọ na-enyere aka.
Multi Dezie - Mee ọtụtụ mgbanwe n’otu oge, ọ bụghị otu mgbanwe ọtụtụ oge. Ọtụtụ nhọrọ na-eme ka itinye aha ihe dị ka ikuku.
Onye na-agagharị - Ọ dịghị nkịtị ọrụ menu. Na-agagharị n'usoro koodu gị n'ụzọ dị iche iche na otu dị iche iche, nlele ụdị na Ndenye Nza.
Nkwado Asụsụ - Site na igbe: HTML, (S) CSS, LESS, JS, CoffeeScript, PHP, Ruby, Python, Apache na XML.
Fantastic Chọta - Agịga na ahịhịa adịkwaghị. Findlọ Ọrụ Nchọta na Dochie, Ntinye ngwa ngwa na cologe regex na-achọ site na faịlụ ma ọ bụ ederede ikuku.
Ikwunye-Na Ike - Espresso na-abịa na ọtụtụ nkwụnye ihe API maka omume, syntaxes, formatting, na ndị ọzọ.
Enwere m obi ụtọ na Espresso ma nweelarị m nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ m! Ọnụahịa nke ngwá ọrụ a zọpụtara m ọtụtụ ego na mbipụta mbụ a nke m nwere ike ịchọpụta na imezi.
Budata Espresso Ugbu a
Ego ole ka na-akọwapụta Mmepụta vidiyo?
Otu Bochum gi nwere ike isi metuta SEO gi